खेलकुदमा सधैँ किन कमजोर ओली कित्ता ? « KhelkudNews.com
Published On : 18 July, 2020 5:21 pm
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवाल र उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना ,यी दुवै ओली गुटका । जब देशमा सदस्य सचिव पदको कुरा उठ्छ सोही, समयमा नेता र गुटका कुरा पनि हुन्छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको विरुद्धमा मोर्चा बन्दी भइरहेको समयमा खेलकुद राजनीतिमा ओली प्रभाव कत्ति ? नियुक्तिमा ओलीको प्रभाव भए पनि त्यस पछि सो गुटको राजनीतिक गतिविधि कता गएको छ र अहिले सदस्य सचिवको यो दौडमा बाल कोट कित्ताको धारणा के हुन सक्छ ? एक पटक विगतको समीक्षा ।
दोस्रो जन आन्दोलनको समाप्ति पछि खेलकुदमा तत्कालीन एमाले( हालको नेकपा)को प्रभाव एकाएक बढेको थियो । साँचो भन्नु पर्दा तत्कालीन राखेप सदस्य सचिव तथा वर्तमान ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठले आफ्ना लागि बाटो मात्र बनाएनन् खेलकुदमा जीवनराम समूहको रूपमा शक्ति केन्द्र नै स्थापना भयो । कत्तिसम्म भने एमालेको बुटवलको आठौँ महाधिवेशन र काठमाडौँको नवौँ महाधिवेशनमा खेलकुदमा संलग्न एमालेका निकायमा जीवनरामको पकडमै रहेको थियो । यो दुवै पटक जीवनराम भने ओली विरुद्ध प्यानलमै थिए ।
यो प्रसङ्ग किन पनि महत्त्वपूर्ण हो भने पूर्व एमालेको राजनीतिमा चासो राख्नेका लागि जानकार भएको विषय हो की ,२० वर्ष भन्दा बढी आफ्नो समूहलाई मजबुत बनाउँदै लगेर ओलीले नवौँ महाधिवेशनमा सफलता पाएका हुन् । त्यो समूहमा पनि खेलकुदमा उनको प्रभाव थिएन । सायद यस पटक सदस्य सचिवको चयन गर्दा बाल कोट कित्ताले यसको पनि हिसाब गर्न सक्छ । बारम्बार राखेपमा उपाध्यक्ष, मन्त्री र सदस्य सचिव भइसके पछि यो गुट किन कमजोर ? यस्तो छ गत डेढ दशक यता खेलकुदमा पूर्व एमालेको राजनीतिक पथ ।
२०६३ मा जीवनराम श्रेष्ठ दोस्रो पदक सदस्य सचिव भए पछि उनको प्रभाव बढ्दै गएको थियो । यही पदमा रहँदा रहँदै जीवनरामको राजनीतिक प्रभाव झन् बढ्न सुरु भएको थियो । एमालेको बुटवल महाधिवेशनमा जीवनराम झलनाथ खनालको पक्षबाट उम्मेदवार हुँदै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य भए । यसै बिचमा भएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा महासचिव पनि भए । चतु¥याइ पूर्वक बाटो तय गरेका उनले तत्कालीन महासचिव ध्रुव बहादुर प्रधानसँग दुई कार्यकाल उनलाई अध्यक्ष मानेर आफू महासचिव हुने सहमति गरेका थिए । यसै पथमा हिँडेर उनी दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको संयोजक समेत भइसकेका छन् । अर्को तर्फ यो दुवै पटक ओलीको नाम लिएर उम्मेदवार भए पनि ती दुवै पटक जीवनरामले जित हात पारे ।
अव प्रसङ्ग एमालेको सङ्गठनको । बुटवल महाधिवेशन पछि एमालेले खेलकुदमा पनि भातृ सङ्गठन खडा गरेको थियो । सोही महाधिवेशनमा पराजित पुरुषोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा खेलकुद महासङ्घ गठन भयो । उता, रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा ओली निकटहरूले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी स्थापना गरे । भन्नलाई गैर राजनीतिक भनिए पनि आम व्यक्तिले यो एकेडेमी ओली निकटहरूको खेलकुदमा समानान्तर भातृ सङ्गठन भन्ने नै बुझे । सुरुमा केही वर्ष सक्रिय रहेको यो एकेडेमीले अन्य कहीँ प्रभाव छाड्न पनि सकेन ।
यसै बिचमा काठमाडौँमा नेपाल खेलकुद महासङ्घको सम्मेलन भएको थियो । सो सम्मेलनमा युवा सङ्घको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका चेतन गिरि र कुनै समय अखिल राजनीतिका चिनिएका कार्यकर्ता मेघराज पौडेल सचिव पदमा उम्मेदवार भए । यी दुवै पराजित भए । विविध कारणले चेतन खेल राजनीतिबाट टाढा भए , परन्तु मेघराज यथाबत छन् । स्मरणीय के छ भने यो निर्वाचनमा पनि ओली गुटको नाममा राजनीतिक लाभ लिनेहरूको कुनै भूमिका रहन सकेन । उता, युवा सङ्घमा महेश बस्नेत अध्यक्ष भइसकेका थिए । तर, खेलकुद महासङ्घको यो अधिबेशसन बस्नेतको पनि पर्दा पछाडि पौडेल श्रेष्ठ नेतृत्वको अकण्टक राज हुने गरी साथ दिएको चर्चा चलेको थियो । तर, यही बाट खेलकुदमा एमाले राजनीतिको नयाँ धारको उदय भएको भने हो ।
यस पछि एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले जीवनराम श्रेष्ठको स्थानमा कर्ण थापालाई खेलकुद इन्चार्ज चयन ग¥यो । त्यसको एक दिन पछि नै जीवनराम श्रेष्ठलाई नै इन्चार्जको रूपमा प्रमुख अतिथि मान्दै खेलकुद महासङ्घले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यसको केही समय पछि खेलकुद महासङ्घको केन्द्रीय बैठक इटहरीमा बसेको थियो सो बैठकमा पनि इन्चार्जको रूपमा कर्णलाई स्वीकार गरिएन । उनलाई काठमाडौँबाट इटहरी सम्म पुगेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण बनाउने काम तिनै मेघराज पौडेलको अगुवाइमा भएको थियो । कत्तिसम्म भने थापालाई खेलकुद महासङ्घले अस्वीकार गरेको थियो भने पौडेलको अगुवाइमा ओली समूहको गतिविधि अगाडी बढेको थियो । परिषद्मा उपाध्यक्ष भएका तिम्सिना तथा मदन भण्डारी स्पिोर्ट्स एकेडेमीका अध्यक्ष भएका र ओली निकट छवि भएका रमेश सिलवालको कुनै भूमिका नै थिएन ।
त्यो समयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरुले यो व्यवहार कर्णलाई नभई स्वयं ओली माथि भएको पनि बताउँछन् ।
यस बिचमा युवराज लामाको कार्यकाल सकिए पछि तत्कालीन मन्त्री पौडेलले पार्टी अध्यक्षलाई पनि अटेर गर्दै केशव विष्टलाई सदस्य सचिव बनाएका थिए । तर, केशव सदस्य सचिव भए पछि ओली समूहको कुनै प्रभाव रहेन । एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा खेलकुद महासङ्घ माधव नेपाल समूहमा प्रस्ट रहेको थियो । सो समयमा कर्ण थापा र मेघराज पौडेल समूहले देश व्यापी रूपमा एमालेमा खेलकुद महासङ्घको समानान्तर गतिविधि जारी राखेका थिए । यस क्रममा सिलवाल र तिम्सिनाको भूमिका खेलकुदमा देखिएको थिएन ।
पछिल्लो पटक ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा त तिम्सिना जीवनराम पक्षमा अडिए । अर्को तर्फ पार्टी अध्यक्ष ओली उमेश लाल श्रेष्ठलाई ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । रमेश सिलवाल सदस्य सचिव त भए । तर, खेलकुद राजनीतिमा ओली समूहको प्रभाव भने बढाउन सकेन । सिलवालको एक वर्षे कार्यकालले एमालेको खेलकुद निकायमा ओली समूहको प्रभावलाई बढाउन पर्याप्त सकेन । सधैँ खेलकुद क्षेत्रमा पार्टीकै प्रतिपक्षको रूपमा रहने ? बालुवाटार निकटका लागि चासोको विषय हो । अहिले सदस्य सचिव दाबेदार मानिएका रमेश सिलवालबाट यो सम्भव नहुने ओली निकटले महसुस गरी सकेका छन् । सिलवाल राजनीतिक भन्दा बढी व्यापारिक समूहको घेरामा परेको प्रस्ट भइसकेको छ । यो कुरा प्रमाणित पनि एक वर्षमा भइसकेको छ । त्यसो त मन्त्री जगत सुनारकै सल्लाहमा तेज गुरुङले सदस्य सचिवमा दाबी गरेको चर्चा पनि चलेको छ । तर, ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सुनार उमेशलाल पक्षमा रहँदा पनि तेज जीवनराम समूहमा रहेका थिए । यस कारण के ओली समूह देखिएको नाम र सतकी हल्लाको भरमा चल्छ या खेलकुदमा पनि आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छ ? विगतमा पठाएका सिलवाल र तिम्सिना लगायतको गतिविधिले खेलकुदमा ओली प्रभाव नरहेकोमा पार्टी अध्यक्ष निकटको मत छ । यदि यसो हो भने बाल कोट शक्ति केन्द्रको आँखामा पौडेल नै उपयुक्त ठहर हुने अनुमान पनि धेरैको छ ।पछिल्लो समय एमाले र माओवादी एकीकरण पछि एकीकृत खेलकुद महासंघमा पनि मेघराज महासचिव हुने चर्चा चलेको थियो । परन्तु, दुइ अध्यक्ष एक अध्यक्ष र एक सह अध्यक्ष हुने प्रावधान बने पछि उनी यहाँ पनि त्याग गर्न बाध्य भएका थिए । यसकारण अव ओली कित्ता विगतका सवै भुमिका हेरेर पौडेललाई जिम्मेवारी दिन तयार हुने आकलन पनि गरिएको छ ।